समुन्द्री किनारमा नायिका आशकाको अनेक पोज ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com समुन्द्री किनारमा नायिका आशकाको अनेक पोज ! - खबर प्रवाह
भारतिय टिभि सिरियल नागिनबाट निकै चर्चामा आएकी आशका गोडरियाको तस्विर सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भैरहेका छन् ।
उनि सिरियल नागिनमा अभिनय गरेपछि चर्चामा अाएका हुन् । उनको त्यो अभिनयलाई दर्शकहरूले धेरै रुचाएका छन् ।
तर अहिले उनले समुन्द्र किनारमा उनले खिचेका तस्वीर व्यापक चर्चाको विषय बनेका छन् ।
उनको त्यो तस्विरमा धेरैले भद्दा कमेन्ट पनि गरेका छन् उक्त तस्विरमा आशा निकै बोल्ड अबतारमा देखा परेकी छिन् ।
उनको बिहे ब्रेट गोबलेसँग भएको थियो । ब्रट गाेबले एक सर्टिफइड याेगा प्रशिषक पनि हुन् । उनले विवाह पछाडि पोल डान्स गरेर पनि चर्चा कमाएकी थिइन् । समुन्द्रको किनारमा लिइएका यी तस्वीरमा आशकाले माथिल्लो कुनै पनि बस्त्र लगाएकी छैनन। हालै मात्र सार्वजनिक उनका तस्विरले बलिउडमा सनसनि मच्चाएको छ ।
उनले आफ्नाे करियरको यात्रा २००२ मा “अचानक ३७ साल बाद” नामक सिरियलबाट गरेकी थिइन । बेलाबेला उनले हट अबतारका तस्विर शेयर गरेर चर्चा बटुलेकी हुन्छिन् ।
बाबुराम भट्टराईकी श्रीमती प्रहरीको फन्दामा !